Tantara · Febroary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tantara · Febroary, 2011
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Febroary, 2011
Ejipta : Kianjan'ny fahafahana, andron'ny fahafahana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Febroary 2011
Omaly dia fanin'ny haravoana ny Ejiptiana. Mizara any fahatsapany i Tarek Amr ary ireo Ejiptiana mpitoraka bilaogy nanatri-maso ny fianjeran'i Moubarak - ilay lehilahy nifehy ny firenen-dry zareo nandritra ny 30 taona ary avy eo voatery nametra-pialàna satria niara-nanandra-peo tokana ny vahoaka hoe :Mialà!
Ejipta: Mitohy ny fety ho an'ny fahalafahana (Lahatsary)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Febroary 2011
Hatramin'izay nivoahan'ny vaovao hoe tapa-kevitra ny hiala tsy ho filohan'i Ejipta i Hosni Mubarak, dia nandeha ny fety nanerana ny firenena. Nanerana an'izao tontolo izao, nankalaza tanaty firaisankina amin'ny vahoaka Ejiptiana ny vahoaka ary koa ny fahitany ny fahalalahany vaovao indray. Horonantsary maro hatrany no aseho eo amin'ny tambajotra sosialy...
Haiti: Herintaona lasa izay…Tsaroantsika tsara
Karaiba02 Febroary 2011
Herintaona androany ny nitrangan'ilay horohorontany nandravarava tao Haiti. Ireo mpitoraka bilaogy Haitiana dia mahatsiaro sy manome sitraka ireo velon'aina tamin'io voina io, na dia fantatsika aza fa mbola marobe ireo asa fanarenana tsy maintsy atao.
Iran: “Ing. ElBaradei namanay” ao Ejipta
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Febroary 2011
Manohy mizara ny fomba fijeriny mikasika ny fitroarana any amin'ny tontolo Arabo ireo Iraniana mpitoraka bilaogy avy amin'ny firehana politika samihafa. Masih, Islamista iray tena fatra-mpandàla ny nentin-drazana no mahita fa vintana iray ho an'ny mpitondra Iraniana raha toa ka tafiditra ao anaty fitondrana any Ejipta i Mohamed ElBaradei.